Amathrendi Wokwakhiwa Kwewebhusayithi Ka-2016 Okufanele Ucatshangwe Ngaphambi Kokudala Isiza Sakho | Martech Zone
Amathrendi Wokwakhiwa Kwewebhusayithi Ka-2016 Okufanele Ucatshangwe Ngaphambi Kokudala Isiza Sakho
NgoLwesibili, Januwari 12, 2016 NgoLwesibili, Januwari 12, 2016 Pamela Webber
Sibonile izinkampani eziningi zihambela ekuhlanzekeni, okuhlangenwe nakho okulula kwabasebenzisi bewebhusayithi. Noma ngabe ungumqambi, unjiniyela, noma uthanda amawebhusayithi nje, ungafunda okuthile ngokubheka ukuthi bakwenza kanjani. Lungela ukukhuthazwa!
Ukushiya izinsuku zokuqala zewebhu, ezi-gaudy, ezazigcwele ama-gifs akhanyayo, amabha we-animated, izinkinobho, izithonjana nama-hamsters wokudansa, ukugqwayiza namuhla kusho ukudala izindlela ezisebenzisanayo, eziphendulayo ezithuthukisa ukuxoxwa kwezindaba futhi zinikeze ngomuzwa ocebile womsebenzisi.
Izibonelo zokugqwayiza okucebile zifaka phakathi ukulayisha ukugqwayiza, ukuzulazula namamenyu, ukugqwayiza kokumiswa phezulu, imidwebo nemiboniso yesilayidi, izithombe ezinyakazayo, ukuskrola, nokugqwayiza kwangemuva namavidiyo. Bheka leli sayithi kusuka eBeagle, indawo yokulawulwa kwesiphakamiso:
Ukugqwayiza okucebile kungabonakala nasekusebenzisaneni okuncane. Isibonelo, ku-LinkedIn, umsebenzisi angazulazula phezu kwekhadi ngemenyu efihlekile yezinketho, bese ukhetha ukweqa indaba noma ukuthatha ezinye izenzo.
Ukugqwayiza kwe-GIF sekuvukile (ngenjabulo?), Futhi kungasetshenziselwa izinhloso eziningi ezahlukahlukene, kufaka phakathi amahlaya, imiboniso, nokuhlobisa nje.
wedizayini, ulimi lokuklama olwenziwe i-Google, luthembele kuzakhi zedizayini esuselwa ekuphrintweni — i-typography, ama-grids, isikhala, isikali, umbala, nokusetshenziswa kwezithombe — kanye nokugqwayiza okuphendulayo nokushintshwa, ukugoqwa, nemiphumela yokujula njengokukhanyisa nezithunzi nikeza ngesipiliyoni somsebenzisi esingokoqobo, esihehayo, nesisebenzisanayo.
I-Material Design isebenzisa isithunzi, ukunyakaza, nokujula ukunikela ngobuhle obuhlanzekile, besimanje ngokugxila ekusebenziseni i-UX ngaphandle kwezinsimbi eziningi namakhwela.
Ezinye izibonelo zokwakheka kwezinto ezibonakalayo zifaka phakathi izithombe ezinqenqemeni, ukuthayipha okukhulu, nendawo emhlophe ehlosiwe.
Ngenkathi i-Material Design inikezela ngendlela eyodwa kumqondo we-minimalism, ukwakheka okuyisicaba kuhlala kuyindlela yakudala yabathandi bemigqa ehlanzekile. Lokho wukuthi, ukwakheka okuyisicaba kuvame ukubonwa njengokubukeka kwedijithali okuyiqiniso, nokuyiqiniso.
Ngokuya ngemigomo yesikhala esimhlophe, imiphetho echaziwe, imibala egqamile, ne-2D — noma i- “flat” - imifanekiso, ukwakheka okuyisicaba kunikeza isitayela esinokusebenziseka okuvame ukusetshenziswa kwamasu afana nezithombe zomugqa nezithunzi ezinde.
Isetshenziswe kahle uma unezindawo ezimbili ezibaluleke ngokulinganayo ongazikhangisa, noma ufuna ukunikeza okuqukethwe eceleni kwezithombe noma imidiya, izikrini zokuhlukanisa ziyindlela entsha enhle yokunikeza umuzwa womsebenzisi omnandi futhi onesibindi.
Ngokuvumela abasebenzisi ukuthi bakhethe okuqukethwe kanye nesipiliyoni sabo, ungakha umuzwa wohlobo lwe-portal oyenga izivakashi ukuthi zingene.
Kubhekisa kubhampa be-chrome nokuhlobisa ezimotweni zakudala, i- “chrome” ibhekisela eziqukathi zewebhusayithi — amamenyu, amaheda, onyaweni nemingcele — okufaka okuqukethwe okuyisisekelo.
Lokhu kungaphazamisa, futhi izinkampani eziningi zikhetha ukugqashula iziqukathi futhi zakha izakhiwo ezihlanzekile, ezinqenqemeni ngaphandle kwemingcele, izihloko noma onyaweni.
“Ngaphezulu kwesibaya” umusho wephephandaba wengxenye ephezulu yekhasi lokuqala lephephandaba. Njengoba amaphephandaba evame ukugoqwa abekwe emabhokisini nasezibonisweni, okuqukethwe okuphoqelela kakhulu kudlula ngaphezu kwesibaya ukubanikeza ithuba elihle lokubamba umuntu ongaba umfundi (kanye nesikhwama sabo semali).
Idizayini yewebhusayithi kudala isebenzisa umbono wesibaya ngesimiso sokuthi ukuskrola kwakungumthwalo. Kepha muva nje, izithombe zesikrini esigcwele nokuqukethwe kubingelela umsebenzisi futhi kukhuthaze ukuskrola ukwambula okuqukethwe okwengeziwe, okujulile.
Ividiyo Yesikrini Esigcwele
Ividiyo ingaba yindlela enhle yokuthola ukunakwa kwezivakashi, futhi ivame ukusebenza ngempumelelo kakhulu kunokubonakalayo noma umbhalo. Amavidiyo wokukhulula afana nalawo asetshenziswa yi-Apple ye-Apple Watch ayindlela eyingqayizivele yokusetha ithoni nokudonsa izivakashi.
Chofoza ukuze ubone HighbridgeIvidiyo ekhasini labo lasekhaya
Uma kukhulunywa ngokwakhiwa kwewebhu, izinto eziningi ezithile zizocaciswa imboni yakho, i-niche, imakethe ekhonjiwe, nokuqukethwe. Ukuhlelwa kwakho kuzoncika kulokho izivakashi eziphendula kukho nokuthi yini enengqondo kakhulu kumyalezo wakho. Kepha ngalezi zindlela ezikhona, uzoba nakho konke okudingayo ukudala iwebhusayithi ephoqelelayo eyenza lokho okudingayo ukuthi ikwenze, futhi lokho kukhombisa ukuthi uyazi ukuthi uhambisana kanjani nezikhathi.
UPamela Webber uyiChief Marketing Officer kwa Ama-99designs, imakethe enkulu kunazo zonke emhlabeni eklanywa imidwebo yezithombe. Ku-99designs, uPamela uhola ithimba lezentengiso lomhlaba jikelele elibhekele ukushayela ukutholwa kwamakhasimende nokwandisa inani lempilo yamakhasimende. Ngaphezu kokuhlangenwe nakho kwakhe njengomkhangisi, uPamela uletha inqwaba yesipiliyoni njengosomabhizinisi we-ecommerce futhi esebenza ngeziqalo ezikhula ngokushesha.
Imibuzo eyi-6 ozibuza yona ngaphambi kokuqala ukwakheka kwewebhusayithi yakho
Izindlela ezi-4 Izicelo ze-Big Data Ezihlinzeka Ngemiphumela